Lionel Messi Iyo Noloshiisa Gaarka Ah Wax Badan Ka Ogaaw +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Lionel Messi Iyo Noloshiisa Gaarka Ah Wax Badan Ka Ogaaw +Sawiro
Lionel Andrés “Leo” Messi waa cayaaryahan Argentina u dhashay kana tirsan kooxda Barcelona waana cayaaryahanka kaliya ee 5-jeer ku guuleestay abaal marinta FIFA Ballons d’Or, weliba 4-jeer oo xariir ah ayuu bilaadaan qaaday.
Balse waxaan si gaar ah u fiirin doonaa Messi iyo noloshiisa gaarka ah oo aan wax badan laga ogeyn waana xidig kubada cagta maqaam sare ka gaaray:
Lionel Messi tan iyo markii uu 20-sano jiray wuxuu saaxiib la ahaa gabadha lagu magacaabo Antonella Roccuzzo oo iyadana ku dhalatay magaalada Rosario ee Messi kasoo jeedo.
Messi wuxuu aqoon u lahaa Antonella Roccuzzo markii uu 5-sano jiray waayo waxay ilmo adeer la tahay cayaaryahanka lagu magacaabo Lucas Scaglia oo ay Messi waligood saaxiibo ahaan jireen.
Messi iyo Antonella Roccuzzo xiriirkooda jaceyl markii uu hal sano ahaa mid qarsoon ayay banaanka soo dhigeen sanadii 2009 wuxuuna xidigaan wareysi uu bixinaayay ku sheegay in Antonella Roccuzzo ay noloshiisa qayb ka tahay.
Messi horey waxaa loogu xaman jiray inuu xiriir jaceyl la sameeyay gabadha reer Argentina ee dhanka Model-ka caan ku ah Macarena Lemos iyo Luciana Salazar.
Messi iyo Antonella Roccuzzo waxaa u joogaan labo wiil Thiago oo dhashay sanadii 2012 iyo Mateo oo isagana dhashay 2015.
Messi iyo qoyskiisa waxay ku wada nool yihiin magaalada Barcelona ee dalka Spain madaama xidigan kooxda Barccelona uu si joogto ah ugu cayaaro kuna nool yahay gobolka Catalunya 15-sano ee ugu dambeesay.
Messi aabihiis waxaa lagu magacaabaa Jorge Messi, waana wakiilkiisa gaarka ah ee kubada cagta u qaabilsan iyo hawlaha kale.
Halka xidigaan hooyadiis lagu magacaabo Celia Cuccittini sidoo kalena xidigaan waxaa la dhasheen labo wiil oo lagu kala magacaabo Rodrigo Messi iyo Matias Messi iyo gabbar lagu magacaabo Maria Sol Messi.